Ny masoivoho amerikana dia nihaona akaiky tamin'ny rhino tao amin'ny valan-javaboary Mkomazi
Home » Travel Travel » Ny masoivoho amerikana dia nihaona akaiky tamin'ny rhino tao amin'ny valan-javaboary Mkomazi
Ambasadaoro amerikana ao amin'ny valan-javaboary Mkomazi
Ny masoivoho amerikana tany tanzania dia niaina traikefa iray indray mandeha - ho an'ny ankehitriny - rehefa nitsidika ny valan-javaboary Mkomazi any avaratra tanzania izy. Teo izy dia nifanatrika tamina rhino mainty tsy fahita firy, ny akaiky indrindra azy dia akaiky ny rhino rehetra.
Ireo rhino mainty sisa tavela dia voaro amin'ny alàlan'ny Mkomazi Park, malaza amin'ny fiarovana ny rhino any Afrika Atsinanana.
Namorona teboka hijerena ilay valan-javaboahary Tanzania National Parks mba hahafahan'ny mpizahatany mijery ny rhino any amin'ny toerana akaiky dia akaiky.
Ny valan-javaboary dia nijanona lavitra ary tsy azo nidirana hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 1951, fa ankehitriny dia misarika mpizahatany mankany amin'ny toerany ao amin'ny Pare sy Usambara Eastern Arc Mountains.
Ny masoivoho amerikanina any tanzania, Dr. Donald Wright, dia nitsidika ny valan-javaboary Mkomazi any avaratr'i Tanzania izay nanome fientanam-po be rehefa nifanena tamina rhino mainty afrikanina, biby dia tsy fahita firy sy be mpitady indrindra.
Ny masoivoho amerikana dia nandoa fitsidihana 2 andro tany Mkomazi Park, izay malaza amin'ny fiarovana ny rhino any Afrika Atsinanana. Eto, ireo rhino mainty sisa tavela dia mijanona eo ambany fiarovan'ny Valan-javaboary Tanzania (TANAPA) ao fiaraha-miasa amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena miaro ny bibidia.
Mkomazi Rhino Park dia nahasarika ny fahalianan'ny Dr. Wright, ilay masoivoho amerikana vao nahazo fankatoavana tany Tanzania, izay nilaza fa nahafaly azy izany satria io no fotoana voalohany nahitany badidra akaiky toy izany. Namorona teboka hijerena ilay valan-javaboahary Tanzania National Parks mba hahafahan'ny mpizahatany mijery ny rhino any amin'ny toerana akaiky dia akaiky.
Ny Ambasadaoro amerikana diplaomaty dia naminavina fa ny lazan'ny Mkomazi Rhino Park dia ho amin'ny ambaratonga manaraka ao anatin'ny taona vitsivitsy ho avy ary hanana mpizahatany maro avy amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao hitsidika azy.
Valan-javaboary Mkomazi, antsoina hoe "Toeran'ny karazan-javamanana tsy fahita firy", dia valan-javaboary afrikanina tsara tarehy mahatratra 3,500 kilometatra toradroa eo amin'ny Tendrombohitra Pare izay manatrika ny Tendrombohitra Kilimanjaro, tampon'ny havoana avo indrindra eto Afrika. Ny Tendrombohitra Kilimanjaro dia azo jerena ihany koa avy amin'ny Valan-javaboary arakaraka ny toetrandro amin'ny andro.
Ilay valan-javaboary dia nijanona lavitra sy tsy azo nidirana hatramin'ny nananganana azy tamin'ny 1951, fa ny toeram-piarovana badino ao amin'ny toerana tsara tarehy eo amin'ny Pare sy Usambara Atsinanana Arc Mountains, dia misarika mpizahatany ankehitriny.
Taorian'ny fitsidihana dia nampanantena ny Dr. Wright fa hampirisika ny vahoaka amerikana hitsidika ny valan-javaboary ary manana toky fa hiverina any indray izy.
Miaraka amin'ny valan-javaboary Tsavo West any Kenya, ny Mkomazi Rhino Park dia iray amin'ireo tontolo iainana voaaro sy manan-danja indrindra voaaro ao Afrika Atsinanana sy Afrika amin'ny ankapobeny. Any amin'ny 112 km atsinanan'ny tanànan'ny Moshi no misy azy eo am-pototry ny Tendrombohitra Kilimanjaro.
Nisy fandaharana manokana ho an'ny Rhino mainty hoditra natokana hiarovana ireo rhinoza fiompiana ao Mkomazi tato anatin'ny 25 taona. Ny rhino mainty dia nivezivezy malalaka teo anelanelan'ny Mkomazi sy ny ekosistia Tsavo, nanarona an'i Tsavo West National Park any Kenya. Miaraka amin'i Tsavo, Mkomazi dia iray amin'ireo tontolo iainana voaaro indrindra eto ambonin'ny tany.
Governemanta sy fizahantany: Maninona izy roa no tsy maintsy miara-miasa
Sandals Emerald Bay manokatra ny varavarany